Kushambadzira Mireza Fekitori | China Kushambadzira Mireza Vagadziri uye Vatengesi
Iyi ndeimwe yemabhajeti edu-ane hushamwari ekushambadzira mireza iyo inokodzera zviitiko zvemukati nekunze uye inoshanda mushe mumigwagwa yakabatikana, nzvimbo dzakashama uye dzakazara nzvimbo dzekutengesa.
Rudzi rwekuratidzira kushambadzira mureza zviri nyore kuchinja iwo magiraidhi uye anochinjika kuratidza. Kana iwe uchida kufumura ako ekushambadzira mameseji kune yakakura chikamu, saka iyo concave yekushambadzira mureza yakakwanira iwe.
Inowanikwa mumhando dzakasiyana siyana, iyi yakatwasuka inoratidzira mureza inokodzera zviitiko zvemukati nekunze uye inoshanda mushe mumigwagwa yakabatikana, munzvimbo dzakavhurika, uye munzvimbo dzakazara dzevashambadziro. Mireza yedu yekuratidzira inosanganisira akati wandei sarudzo dzehardware kuti dzikwane zvaunoda zvakasiyana, muchinjikwa hwaro nemvura chigadziko ndeyekuratidzwa pane imwe nzira yakaoma iyo spike yakanaka kune rakapfava ivhu.
Iyi ndeimwe yeedu bhajeti-inoshamwaridzika minhenga mureza iyo inotora chimiro cheye misodzi. Iyo yakasarudzika dhizaini yemusodzi wemisodzi inobvumidza yako yekushambadzira ruzivo kuti ibude kunze kubva kune echinyakare kuratidza zvigadzirwa. Hupfumi teardrop mureza wakakodzera zvemukati nekunze zviitiko uye unoshanda mushe mumigwagwa yakabatikana, nzvimbo dzakavhurika uye dzakazara vanhu zviratidzo.
Iyo inokwanisika rectangle feather mureza inoshandiswa zvakanyanya kune zvemukati nekunze zviitiko uye inoshanda mushe zvakabatikana migwagwa, yakavhurika nzvimbo uye yakazara vanhu show yekutengesa.
Rudzi urwu rwekushambadzira feather mureza rwakanakira kune ese marudzi emabasa ekuratidzira. Neiyi rectangle yekuzivisa mureza pane yako irikuuya yekusimudzira chiitiko, iwe unogona kugara wakamira kubva kune vamwe vese.
Tanga kukwidziridzwa kwako nemireza yekuratidzira iyo isina kureruka uye inoita kuti iwe unakirwe neyakajeka uye iri nyore kuratidza.
Zvichakadaro, edu ekuratidzira mireza anonyanya kugadzirisa neakasiyana maumbirwo uye akawanda Hardware iwe aunosarudza kubva. Kana iwe uchironga kubata zvakanyanya kutarisisa pane iri kuuya yekutengeserana show kana yekusimudzira chiitiko, saka edu ekuratidzira mireza ane chokwadi chekukubatsira iwe kuzviita.